ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ကျူးဘားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hector Conde Almeida အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Hluttaw News ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ကျူးဘားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hector Conde Almeida အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ကျူးဘားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hector Conde Almeida အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဖေ‌ဖျောဝါရီ 23, 2018 In: Hluttaw NewsNo Comments
နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် ဘန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ကျူးဘားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hector Conde Almeida အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကျူးဘား-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအချင်းချင်း၊ လွှတ်တော်အချင်းချင်း၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့် လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၊ ပွညျသူ့လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ ဦးဝငျးမွငျ့ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျောဆိုငျရာ ကြူးဘားနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hector Conde Almeida အား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော ဖဖေျောဝါရီ ၂၂ ရကျ
ပွညျသူ့လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ ဦးဝငျးမွငျ့သညျ ဘနျကောကျမွို့ အခွစေိုကျ ပွညျထောငျစုသမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျောဆိုငျရာ ကြူးဘားနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Hector Conde Almeida အား ယနေ့ မှနျးလှဲ ၁ နာရီခှဲ အခြိနျတှငျ နပွေညျတျောရှိ လှတျတျောအဆောကျအအုံ ပွညျသူ့ လှတျတျောဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ကြူးဘား-မွနျမာ နှဈနျိုငျငံ အစိုးရအခငျြးခငျြး၊ လှတျတျောအခငျြးခငျြး၊ ပွညျသူအခငျြးခငျြး ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ရငျးနှီးပှငျ့ လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ ပွညျသူ့လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌနှငျ့အတူ ပွညျသူ့လှတျတျောဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဦးတီခှနျမွတျနှငျ့ ပွညျသူ့လှတျတျောရုံးမှ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျူးဘားနှင့် အာဂျင်တီးနား သံအမတ်ကြီးများအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ရွေးကောက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့် တိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်း နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
ဩဂုတျ 22, 2019
ဩဂုတျ 20, 2019
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC-U) မှ JMC ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ ရှင်းလင်းခြင်း အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်
ဒီလှိုင်းစာစောင်၊ အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၃၁)၊ ၁၉-၈-၂၀၁၉
ဩဂုတျ 19, 2019